I-087 Cottage On Riverfront Beach At Resort Sleeps 6 - I-Airbnb
I-087 Cottage On Riverfront Beach At Resort Sleeps 6
Ehrenberg, Arizona, i-United States
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Arizona Oasis
I-Arizona Oasis RV Resort, eyayaziwa ngokuthi i-Colorado River Oasis RV Resort iyindawo ethokozisayo yokubalekela lapho abantu babo bonke ubudala bengeza khona ukuze babalekele konke futhi bachithe isikhathi esithile emfuleni.
Izindlu zethu Ezincane ziyikamelo lokulala elingu-1 elinesofa lokudonsa kanye nendawo ephezulu (indawo ephezulu inosilingi ophansi futhi ilungele izingane) ukuthi ilale abantu abangaba ngu-6. Indawo yokulala ilungiselelwe umbhede owodwa. (Letha okokulala okwengeziwe uma usebenzisa umbhede wokudonsa kanye nomatilasi onombhede wendawo ephezulu).
Ukuqashwa kwe-Park Model kulula ukuhlonyiswa ngezinto eziyisisekelo ukuze wenze ukuhlala kwakho kujabulise kakhudlwana okuhlanganisa: ibhodwe lekhofi (zilethela izihlungi zakho nekhofi), i-toaster, ukusetha kwezitsha ezi-4, izinto zesiliva, nezibuko. Amabhodwe namapani, okokugcina amabhodwe namathawula asekhishini, izinto zasekhishini nemibese, isethi yamathawula okugeza angu-2 (impahla etholakala e-Clubhouse), okombhede owodwa. Uzothola ikhodi eyodwa engasetshenziswa ukuxhuma ku-WiFi yethu. Amakhodi engeziwe ayatholakala ukuze athengwe ehhovisi. Ukuqashwa kuhlanganisa ikhebula.
Ukwethulwa komzila wesikebhe emi-5 kuzokungenisa futhi kukukhiphe emfuleni ngokushesha. Izindawo ezi-2 zolwandle zokubeka amashubhu akho, ama-kayak, izikebhe nokunye kwenza kube lula ngawe ukuthi ufike ezweni. Izinsiza ze-Clubhouse njenge-swimming pool (ne-kiddy pool!) ubhavu oshisayo, amashawa nokunye kunezela endleleni yakho yokubaleka.
Ibungazwe ngu-Arizona Oasis
Abasebenzi bethu basehhovisi langaphambili bayatholakala kusukela ngo-9 AM kuya ku-5 PM isikhathi sase-Arizona nsuku zonke. Uma ufika ngemva kwamahora, iphakethe lokuhlola sekwephuzile lizotholakala kuwe emnyango wangaphambili. Uma unezinkinga ngesheke lakho ephaketheni shayela ulayini wehhovisi uluvumele lukhale. Isevisi yethu yokuphendula ngemva kwamahora izokusiza.
Abasebenzi bethu basehhovisi langaphambili bayatholakala kusukela ngo-9 AM kuya ku-5 PM isikhathi sase-Arizona nsuku zonke. Uma ufika ngemva kwamahora, iphakethe lokuhlola sekwephu…
Hlola ezinye izinketho ezise- Ehrenberg namaphethelo